पूर्वी एसियामा कोरोनाको प्रभाव र तामाङ संघसंस्थाहरुद्धारा सञ्चालित गतिविधि - Tamang Online
पूर्वी एसियामा कोरोनाको प्रभाव र तामाङ संघसंस्थाहरुद्धारा सञ्चालित गतिविधि
याम्बु -अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद् (ITC) मा आवद्ध पूर्वी एसिया स्थित विभिन्न तामाङ संघ/संस्थाहरुद्धारा कोरोना (COVID-19) बिरुद्ध सञ्चालित गतिविधि तथा राहत संकलनको लागि गरिएको पहलकदमी सम्बन्धि क्षेत्रीय परिषद सचिब विश्व घिसिङ तामाङले रिपोर्ट तयार पार्नु भएको छ ।
फुर्बा दोर्जे मोक्तान,
सल्लाहकार, नेपाल तामाङ घेदुङ मलेसिया ।
मलेसियामा हालसम्म कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट ४६८३ जना संक्रमित भएका छन् । जसमध्ये २१०८ जना उपचारपछि कोरोना मुक्त भएका छन् भने ८२ जना भने सिकिस्त बिरामी छन् । ४३५ जना विदेशीहरु यसबाट संक्रमित भएकोमा १ जना नेपाली पनि रहेको तर ती संक्रमित नेपाली हाल अस्पतालमा उपचाररत रहेको र उहाँको अवस्था सामान्य रहेको छ ।
मलेसिया सरकारले गत मार्च १८ तारिखदेखि आगामी अप्रिल २८ सम्मको लागि देशभर लकडाउन घोषणा गरेको छ । यहाँ रहेको कम्पनीहरुमध्ये अधिकांश बन्द छन ्भने केही कम्पनीहरु मात्र सञ्चालनमा रहेको छ । बन्द रहेको कम्पनीहरुले कामदारहरुलाई ५० प्रतिशत मात्र तलब दिने घोषणा गरेको छ ।
कोरोना महामारीको कारण विशेषगरी यहाँ रहेको अवैधानिक कामदारहरु भने अत्यन्तै समस्यामा परेका छन् । साथै कामको करार अवधि सकेको नेपाली कामदारहरु आफनो देशमा फर्किन लागेको अवस्थामा नेपालमा लकडाउन भएपछि फर्किन नपाएर झनै समस्यामा छन् । उनीहरुलाई कम्पनीको तर्फबाट कुनै पनि सुविधा नपाउने भएकोले बस्न, खान र स्वास्थ्य सुविधामा अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ । अवैधानिक कामदार र करार सकिएको कामदारहरुको लागि नेपाली दुतावासमा अनुरोध गरिएपनि हालसम्म कुनै पहल भएको छैन । कोरोनाले गर्दा नेपाली कामदारहरुमा परेको समस्यालाई समाधान गर्न मैले व्यक्तिगत तर्फबाट अप्रिल ४ तारिखको दिन सहयोग गरौं भनेर फेसबूक मार्फत सूचना जारी गरे ।
हेल्लो मलेसियावासी नेपालीजनहरु ! कुनै समस्या परेमा, कृपया सम्पर्क गर्नुहोला, साथै समस्यासम्म पुगियोस कृपया शेयर गर्नुहोला । साथै क्वालालाम्पुर र नगेरी सेम्बिलानमा रहेकोहरुलाई आफै पु¥याउने छ अन्य ठाउँमा रहेकोलाई बैंक मार्फत समस्याको समाधान गर्नेछु । त्यसपछि ती समस्या समाधान गर्नको निम्ति मलेसियामा स्थित विभिन्न संघ÷सस्थाहरु :
नेपाल तामाङ घेदुङ मलेसिया,
नेपाल तामाङ कलाकार संघ मलेसिया,
गैर आवासीय नेपाली संघ मलेसिया,
नेपाल तमु समाज मलेसिया,
हिमालयन फूटबल क्लब मलेसिया,
प्रवासी नेपाली हातेमालो कल्याणकारी समाज मलेसिया,
ओखलढुङ्गा एकता सेवा समाज मलेसिया,
नेपाली जनसम्पर्क समिति मलेसिया,
जनउद्धार केन्द्र पेनाङ मलेसिया,
नेपाली कलाकार संघ मलेसिया ।
यसरी एकजुट भई समस्या जहाँ छ त्यहाँ समाधान गरौं भन्ने हेतुका साथ मलेसियाको लकडाउन र कोभिड–१९ बाट सबैजनालाई सतर्क बनाई आफू पनि सुरक्षितका साथ खाना नभएको ठाउँमा म आफै खाद्यन्न पु¥याउन जाने गरेको छु । अहिले समस्या परेको १३ जनालाई लकडाउन नखुले सम्मको लागि खाद्यन्नको व्यबस्था गरिएको छ र अरु पनि त्यस्ता समस्या पर्नेहरुलाई तत्काल समस्याको समाधान गरिनेछ ।
अर्कोतर्फ आउने दिनमा यो समस्या झन् बिकराल हुँदै जाने संकेतहरु पनि देखा पर्दैछ । यो अवधि केही हप्ता लम्बिएमा हजारौंको संख्यामा (करिब १५-२० हजार) अवैधानिक रुपमा रहेको र काम छोडिसक्नु भएका नेपालीहरुलाई गर्नुपर्ने सहयोगको आवश्यकता हाम्रो क्षमताभन्दा धेरै माथि हुन सक्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा नेपाली दूतावासको पहलमा मलेसियास्थित सबै संघ÷संस्थाहरुको साझा संयन्त्र निर्माण गरी सहयोगको काम एकीकृत ढंगले अगाडि बढाउने र नेपाल सरकारले तत्काल मलेसिया सरकारसँग कुटनीतिक प्रयासमार्फत यो समस्या समाधानको निम्ति पहल गर्न पनि आग्रह गर्दछौ ।
हेम लो तामाङ
अध्यक्ष, तामाङ घेदुङ मकाउ ।
मकाउमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट ४५ जना संक्रमित भएका छन् भने संक्रमित १३ जना विरामी उपचारपछि घर फर्किएको अवस्था छ । संक्रमितमध्ये कसैको पनि मृत्यु भएको छैन । कोरोनाबाट कुनैपनि नेपालीहरु संक्रमणमा परेका छैनन् । तामाङ घेदुङ मकाउ सहित यहाँ रहेको नेपाली संघ/संस्थाहरुको सहकार्य तथा गैर आवासीय नेपाली संघ मकाउको पहलमा २००० एन ९५ मास्क नेपाल सरकारलाई बुझाउन चीनस्थित महावाणिज्यदुत ग्वान्जाउलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
मकाउमा करिब ४००० को संख्यामा नेपालीहरु विभिन्न पेशामा कार्यरत रहेकोमा कम्पनीहरुको तर्फबाट हालसम्म कुनैपनि समस्या नरहेको र कसैले पनि रोजगार गुमाउनु परेको अवस्था छैन । भविष्यमा आउनसक्ने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै तामाङ घेदुङ मकाउ लगायत नेपाली संघ÷संस्थाको अध्यक्षहरु हङकङस्थित नेपाली महाबाणिज्यदुतसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका छन् । यो अवधिमा नेपालमा छुट्टीमा गएको नेपालीहरु लकडाउनको कारण मकाउ फर्किन नसकेको अवस्थामा कम्पनीले र मकाउ सरकारले के गर्ने भन्ने कुरा भने अन्यौलमा नै रहेको छ ।
बोइस लामा तामाङ
अध्यक्ष, तामाङ समाज थाईल्याण्ड ।
हालसम्म थाईल्याण्डमा बसोबास गर्नुहुने कोही पनि नेपालीहरु कोभिड–१९ बाट संक्रमित छैनन् । यो महामारीको कारणले बस्न, खाना संकटमा परेको नेपालीहरुलाई सहयोग गर्न तामाङ समाज थाईल्याण्ड, थाई नेपाली समाज र हाम्रो गोर्खा नेपाली समाज मिलेर उद्धारको संयुक्त प्रयास गर्दै आएका छौ । हाल सम्म सहयोग गर्नुपर्ने नेपालीहरु थाइलैण्डमा नभएको जानकारी गराउँदछु ।
रुबिना लामा तामाङ
अध्यक्ष, तामाङ समाज जापान ।
संसार अहिले कोभिड–१९ को डरलाग्दो चपेटामा फसिरहेका छन् । जापानमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ । आईतबार बेलुकी १० बजेसम्म जापानभर आन्तरिक संक्रमितको संख्या ७३७० जना र योकोहामा पोर्टमा क्वारेन्टाइनमा गरेको डायमण्ड प्रिन्सेस क्रुजको संक्रमित यात्रुहरु सहित जम्मा ८०८२ जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित रहेको जसमा २ जना नेपालीहरु पनि रहेका छन् । हालसम्म यहाँ १५८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
जापानमा रहेका नेपालीहरुमा पनि कोरोना भाइरसको कारण धेरै समस्याहरु आईरहेको छ । नेपाल तामाङ समाज जापानले पनि यस्तो आपतकालीन अवस्थामा जापानमा रहेको विभिन्न संघ÷संस्था र ल्च्ल्ब् जापानसँग सहकार्य गर्देै आर्थिक र भौतिक रुपमा सक्ने सहयोग गर्दै आईरहेका छौ ।
बिशेषगरी कोभिड–१९ को कारण भिषा सम्बन्धि समस्या हुनेलाई कानुनी परामर्शको ब्यवस्था गरिएको छ । भाषाको समस्या भएको नेपालीहरुलाई ल्च्ल् जापानले कोरोना भाईरस सहयोग संयन्त्रको भाषा अनुवादक टिम र स्वास्थ्य परामर्श विज्ञहरुको पनि व्यबस्था गरेको छ । कोरोनाको कारण नेपालीहरुलाई आउन सक्ने समस्यालाई राजदुतावास समक्ष पु¥याएर छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्न सक्दो सहयोग गर्दै आएका छौ । भोलिका दिनमा पनि कोरोनाबाट नेपाल र जापानमा रहेको नेपालीहरु र विशेषगरी तामाङ समाजमा आईपरेको समस्यालाई समाधान गर्न नेपाल र प्रवासमा रहेको विभिन्न तामाङ संघ÷संस्थाहरुसँग हातेमालो गर्दै नेपाल तामाङ समाज जापान कोरोना बिरुद्धको अभियानमा सदैव लडिरहने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्दछौ ।
मेघ प्रसाद तामाङ
अध्यक्ष, नेपाल तामाङ संघ, साउथ कोरिया ।
साउथ कोरियामा हालसम्म हालसम्म १०५१२ जना संक्रमित देखिएकोमा २१४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ तर नेपालीहरु भने कोहीपनि कोरोनाबाट बिरामी भएका छैनन् । कोरोना बिरुद्धको अभियानमा ल्च्ल्ब् कोरियाको संयुक्त पहलमा झण्डै एक करोड चौध लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको रकम संकलन भएको छ । यस अघि नै कोरियाबाट नेपालमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामाग्रीहरु पठाइसकेको जानकारी गर्दछु । यसैगरी नेपाल तामाङ संघ कोरिया सहित नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ कोरियाको पहलमा ६ लाख बराबरको स्वास्थ्य सामाग्री सम्पूर्ण प्रदेशमा बितरण गरिएको पनि जानकारी गर्न चाहन्छु ।
सचिव, हङकङ तामाङ घेदुङ हङकङ ।
यहाँहरु सबैलाई लासो फयाफुल्ला ! यतिबेला संसारकै मानव समुदाय सबै पिरोलिएर बसेको अवस्था छ । २१ औं शताब्दीमा विकसित विज्ञानको चमत्कार हेर्दै मख्ख परेका हामी मानव जाति शायदै यस्तो दिन आउला भनेर कुनै कोणबाट कल्पना पनि गरेका थिएनौं । यो शताब्दीको चमात्कारिक विकास, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको अभुतपूर्व छलाङ मारिरहेको यो संसार, समुन्द्रमाथि विशाल बस्ती बनाउँदै गरेको संसार देखेर अचम्मित भएका हामी आज साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भनेर १८ औ शताब्दीतिर फर्केर जीवनको महत्व बुझिरहेका छौं । प्रत्येक बिहानको झिसमिसेमा हामी निन्द्राबाट ब्युँझेपछि ज्वरो नभएमा, खोकी नलागेमा, आज नयाँ जीवन नयाँ दिन भनेर सास तान्नु पर्ने अवस्था आएको छ । धन्न हामी अहिलेसम्म खानेकुराको अभावले अनिकालको समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था आएको छैन । तर अझै समस्या लामो नै छ, ढुक्क भइहाल्नुपर्ने अवस्था देखिदैन । हामी सामाजिक कार्यकर्ताहरुलाई अर्को ठूलो जिम्मेवारी र चुनौती थपिएको छ । हामी आफै समस्याबाट पार नहुने अवस्थामा के गर्ने कुनै उपायहरु दिमागमा फुर्न सकिरहेको छैन ।
हुन पनि संसारका महाशक्तिशाली राष्ट्रहरु यो बेला कोरोनासामू घुँडा टेक्दै छन् । संसारमा अर्को ठूलो न्यिदब िभ्अयलयmष्अ ऋचष्कष्क मा धकेलिसकेको अवस्थामा हामी त अत्यन्तै सानो आलु त हो । हामीले के गरौं ? के गर्न सकिन्छ र ? तैपनि कोरोना लाग्ने बित्तिकै मरिहाल्दैन भन्ने ज्वलन्त उदाहरणहरु प्नि हामीले देखिरहेकै छौं । हामी आफैले त्यत्ति ठूलो ब्यक्तिगत समस्या नभोगेको हुनाले हाम्रो तर्फबाट हामीले पुर्वी एसियामा साच्ँचै नै आपतमा परेका, खानाकै अभावमा भोकमरीको कारणले छटपटिएका विशेषगरी तामाङ जाति र अन्य नेपाली समुदायलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु, ल्च्ल्ब् वा नजिकको राजदुत, महाबाणिज्यदूत र जातीय तथा क्षेत्रीय संस्थाहरुसम्म जानकारी गराउने र सके आफैले वा आफू आवद्ध संस्थाको माध्यमबाट केही राहत सहयोगको जिम्मेवारी लिनु पर्ने जरुरी पनि हुन सक्छ । दक्षिण कोरियाबाट त्यहाँ रहेका संस्थाहरुबीच समन्वय गरेर नेपाल सरकारलाई सहयोग गरेको देखेको छु । मलेसियामा फूर्वा दोर्जे मोक्तानको व्यक्तिगत सहयोग र अन्य संस्थाहरुको समेत समन्वयमा सहयोग भइरहेको छ ।
हङकङमा १३ अप्रिल सम्मको रिपोर्ट अनुसार कोभिड–१९ बाट १०१० जना संक्रमित भएका छन् । जसमा ४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने उपचारपछि निको हुनेको संख्या पनि उल्लेख्य छ । हङकङ सरकारले बेरोजगारहरुलाई भत्ताको व्यबस्था गरेको हुँदा यहाँ रहेका नेपालीहरुलाई त्यत्ति धेरै समस्या हुने देखिन्न । व्यापार व्यबसाय गरेका नेपालीहरुलाई पनि सरकारको तर्फबाट अनुदान दिइँदैछ । अहिलेसम्म हङकङमा लकडाउन भएको छैन तर सार्वजानिक क्षेत्र तथा रेस्टुराँमा भने ४ जना भन्दा बढी भिड जम्मा हुन मनाही गरिएको छ । रेल, बस तथा अस्पतालको हकमा भने ती नियम लागू गरिएको छैन । हङकङमा जनताहरु आफै पनि सचेत भएको कारण बिना मास्क कोही पनि बाहिर ननिस्केको कारण पनि यहाँ त्यति धेरै संक्रमण भएको अवस्था छैन ।
१४ अप्रिल २०२०
« पुँजिवादी व्यवस्थाको बिकल्पमा विविधतायुक्त प्रकृति मैत्री समाजवाद (Previous News)
(Next News) तामाङ जाति भित्रको घिसिङ थर (परिचय) »